Cayaaryahanka Gervinho - BBC Somali
10 Nofembar 2014
Tan iyo markii ay billowdeen ciyaaraha Talyaaniga ee Serie A oo qeyb ka ah Premier League ayaa waxaa soo if baxay in Gervinho uu kaa mid yahay ciyaaryahanada xirfada fiican ku leh cayaaraha Kubada cagta ee Afrika.
Kulan ciyaareedkiisii Roma, ciyaaryahanka 27 jir ka ah ayaa waxaa uu dhaliyay 12 gool 37 ciyaar ee uu la saftay Francesco Totti and Torino's Alessio Cerci (kaas oo haatan u cayaaro Atletico Madrid Atletico Madrid) waxa uu kooxdiisa u caawiyay si ciyaaryahan kale uusan u caawin.
Roma ayaa waxaa ka dhammaaday wareegi 2aad ee horyaalka Talyaaniga Serie A iyada oo ka qeybgaleysa ciyaaraha Champions League markii ugu horeysay muddo 4 sano ah.
Markii ay kusoo noqdeen tartankaan Koobka Kooxaha Yurub ee September, Ciyaaryahanka Gervinho ayaa laba mar ku guuleestay waxa uuna noqday cayaaryahankii tartanka isaga oo 5-1 ku garaacay CSKA Moscow.
Tababaraha Roma Rudi Garcia ayaa u muuqda in uu awood u yeeshay in uu helay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee reer ivory.
Kaddib amaahdi lagu guuleestay ee Beveren iyo Le Mans, ee Lille, Garcia, ayaa waxaa kusoo caan baxay magaciisa Gervinho.
Xilli ciyaareedkiisi labaad ee dhammaadkii ciyaaraha kooxda, ma ahayn keliya waxa ay ku guuleesteen Coupe de France balse sidoo kale markii ugu horeysay ee Ligue 1 magac ee 56 sano.
Gervinho ayaa waxa uu dhaliyay 15 gool xilli uu kasoo muuqday ciyaaraha la liigaha intii lagu guda jiray ololahaas waxa ayna la xirriirtay kooxo waa weyn qaarada Yurub.
Arsenal ayaa ku guuleysatay tartanka si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara inkastoo ay jireen balanqaadyo ah inuu helo tan ugu wanaagsan.
Cayaaryahanka reer France Gervinho waa uu saxiixay, wuxuuna helay 8 milyan oo, taas oo muujisay in la gorgortamo.
Sida magacyo badan oo waaweyn oo reer Ivory Coast ah, ayna ka mid yihiin walaalaha Toure iyo Salomon Kalou, ayaa waxaa uu ka billaabay xirfadiisa cayaaryahannimo asaga oo da’yar ah Akaadhemiyada caanka ah ee ku taalo Abidjan.
Sidaas ayuuna ku noqday Gervais Yao Kouassi markii ugu horeysay caan ku noqday asaga oo qaatay magaca Gervinho kaddibna naynaastii kabtaka reer Brazil .
Waxa uu ahaa xidigii reer Ivory Coast ee ciyaarahii Koobka Adduunka ee lagu qabtay dalka Brazil. Balse Tartankaasi ciyaaraha ma aysan noqon sidii laga filayay Ivory Coast, lakiin Gervinho ayaa waxaa lasooo darsay lacag aad u badan..
Waxa uu dhaliyay 2 gool, waxaana ka mid ahaa gool aad u quruxbdnaa oo uu ka dhaliyay Colombia, iyo mid uu dhaliyay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxaha oo ay la ciyaareen Griiga.
Haddii aysan ahaan la hayan Goolkii soo daahay ee Girogios, goolka Bony ma ahadeen mid ku filan in Ivory Coast ay u soo baxdo wareega ugu danbeeyo ee 16 –aad markii ugu horeysay taariikhdooda.
Waxaa garab socda Bony iyo Yaya Toure, Gervinho oo hadda ah xiddig ka mid cayaaryanada Maroodiyaasha, isaga oo dhaliyay goolkii guusha Kulankii ugu horeeyay Herve Renard ee 2-1 kaga badiyeen Sierra Leone.